ANDRY RAJOELINA : Mitohy ny fanampiana ho an’ ireo marefo ara-pivelomana
Ohatra tsara indrindra. Tsy mikely soroka fa mitohy hatrany ny fanohanana sy fanomezana fanampiana an’ireo olona marefo ara-pivelomana sy tra-pahasahiranana ataon’ny Kandidà Andry Rajoelina. 26 novembre 2018
Mitohy ny fidinana ifotony ataony miaraka amin’ ireo mpiara-miasa aminy, mba hijerena akaiky ireo olana mianjady amin’ny vahoaka ahafahana manampy sy mitondra fanampiana ho azy ireo.
Nifantoka betsaka tamin’ny fijerena ireo olana sedrain’ny mponina eny ifotony indray ny fandaharam-potoanan’ny kandidà Andry Rajoelina ny herinandro lasa teo iny. Saika noteteziny avokoa ireo boriborintany teto Antananarivo ary anisany nahazo tombony manokana tamin’ izany ireo mponina mipetraka eny amin’ny faritra iva. Maro tamin’ ireto farany no nametraka fitokisana tamin’ny Kandidà n°13 ka nifidy azy ny 7 novambra lasa teo. Tsy nanadino izany ny Kandidà Andry Rajoelina fa tonga nitafa mivantana tamin’ireo vahoaka mihitsy mba hamaly soa azy ireo. Nahazo ny anjarany ihany koa ny mponina tetsy Ankorondrano.
Tonga teny an-toerana ny Kandidà Andry Rajoelina ny faran’ ny herinandro lasa iny nizara fitaovana ho an’ireo mpianatra madinika. Natao izany mba hanamaivana ny fahasahiranan’ireo ray aman-dreny amin’ny fanomanana ny fidiran’ny mpianatra. Hafaliana tanteraka no hita soritra teny amin’ny endrik’ireo renim-pianakaviaka nisitraka ny fanampiana satria vita ho azy ny fidiran’ny mpianatra noho ny fanampiana noentin’ny Kandidà Andry Rajoelina.
Ankoatra izay dia mbola amperiny ihany koa ny fanatanterahana ireo velirano ao anatin’ ilay vinam-pampandrosoana ho an’i Madagasikara na ny IEM. Anisany imasoan’izy ireo fatratra ny fanomezan-tanana ho an’ ireo fianakaviana marefo sy tra-pahasahiranana. Nidina ifotony teny Mahamasina, Itaosy ary Andohan’i Mandroseza indray nanatanteraka ny iraka avy amin’ ny Kandidà Andry Rajoelina ireo ekipan’ny IEM ny faran’ny herinandro lasa teo iny ihany. Zazavavikely iray malemy tsy afa-mitsangana tao anatin’ny valo taona no notoloran’izy ireo seza misy kodiarana, renim-pianakaviana iray ihany koa no nahazo milina fanjairana mba hahafahany mampandroso ny ankohonany ary vondrona zazalahikely mpanao baolina no nomena baolina. Ireo rehetra ireo dia hoentina hatrany mba hanampiana ny isan-tokantrano avy amin’ny Kandidà Andry Rajoelina.
Fokontany maro nahazo fotodrafitrasa
Raha fintinina fohy ny herinandro lasa teo, dia efa notsidihany ihany koa ny Fokontany Andohatapenaka, Ambanidia, Manakambahiny, Ampefiloha Ambodirano. Ankoatra ny teny feno fankasitrahana nataony dia notolorany fotodrafitrasa mamaly avy hatrany ny filàna amin’ny andavanandrom-piainany ihany koa ireo mponina teny amin’ireo toerana ireo. Anisan’izany ny fanomezana rano fisotro madio izay olana fototra sedrain’ireo eny ambany tanàna. Ny fanamboarana toerana fanasan-damba ary ny fanamboarana tetezana hisorohana amin’ny hisian’ny fihotsahan’ny tany sy fiakaran’ny rano rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra.
Tsy mijanona hatreto anefa fa mitohy ary mbola hitohy hatrany izay asa fanasoavana ny mpiara-belona ataon’ny Kandidà Andry Rajoelina izay. Tanjona ny hanala fahasahiranana ny vahoaka Malagasy izay tafiditra ao anatin’ny fandaharan’asan’ny IEM.